Magaca badeecada xusullada birta ah ee birta
Cabbirka 1/2”-12” / DN15-DN300 ama loo habeeyay
Adag 1.5-4mm ama si gaar ah loo sameeyay
Habka geedi socodka Forge Processing,Advance CNC Machine
Dhameystirka A:santin B:400#-600# muraayadda C:Mat
Kartida Bixinta 100Ton / Ton maalintii
Waxaa loo istcimaalay qalabka qurxinta ee gacmo-gashi ama qalabka dhejinta tuubbada
Shirkadeena, Foshan Jinsuiying Qalabka Aan Birta Laheyn ee Birta Co., Ltd, waxaa la aasaasay bishii Janaayo,2004. Waa shirkad leh warshad u gaar ah isla markaana ku takhasustay soo saarista tuubbooyinka birta naxaasiga ah oo ay ku jiraan tuubbooyinka leydi, tuubooyin laba jibbaaran iyo tuubooyin wareega oo leh cabbirro kala duwan. Oo weliba waxaannu soosaaranaa go'yaal bir ah iyo qalab dheeri ah. Daboolaya aag ka mid ah 20 hektar, warshaddeenu waxay ku taal No.89, West Gaoming Avenue, Magaalada Mingcheng, Degmada Gaoming, Magaalada Foshan, Gobolka Guangdong. Bil kasta warshaddeena ayaa soo saari karta 5000 ku 6000 tan oo tuubooyin ah.
Tan iyo markii la aasaasay shirkadeena, waxaan wadnay dadaallo aan ku soo saarayno alaabada ay macaamiishu ku qanacsan yihiin. Shirkadeenu waxay ku raaxeysataa sumcad wanaagsan waxaana la siiyay shahaadooyin badan oo ay soo saareen guddiyada warshadaha ee awoodda leh sida TUV, LRQA，ASTHMA,ANIGA,iwm. Hadday suurta gal tahay, Waxaan rajeyneynaa inaad sidoo kale ka mid noqon karto macaamiisheena iskaashiga ganacsi ee muddada dheer nala leh.
Bandhigyada iyo Carwooyinka Ganacsiga
Faahfaahinta Baakadaha wrapped in a wooden carton or paper box
Qalabka Xidhmada Wood and Paper
Waqtiga dirida 20-25maalmo kadib helitaanka deebaajiga
Advantanges Seaworthy;Si fudud loo dejiyo
Dekedda GAARKA; NANSHA;Ama Sida Loo Codsaday
A: Waxaan ku takhasusay soo saarida tuubooyin bir ah oo birta ka sameysan oo aan laheyn,tuubooyin laba jibbaaran, tuubooyinka leydi, tuubooyin daloola iyo
dhuumaha qaybta gaarka ah. Waxaanan leenahay taarikada birta ah iyo qalabyada sidoo kale.
1. Macluumaadka soosaarka: Qeexitaanno ay kujiraan waxyaabo, dhexroor dibadda ah, dhumucdiis, dherer. Qaybaha aad u rabto faahfaahin kasta ama miisaanka dhuumaha aad rabto
2. Waqtiga dirida & shuruud xirxirida;
3. Macluumaadka rarka: magaca shirkadda, cinwaanka, lambarka taleefanka, dekedda loo socdo;